ᐈ Lords Mobile Ihe mgbako ❤️ 2021
Lords Mobile Ihe e ji mara ya bụ ịbụ egwuregwu dị oke mkpa maka ndị ahụ chọrọ ịhazi egwuregwu ha.
Yabụ mgbe ị na-egwu ya, ị ga-enyocha ma chee nke ọma ihe ị ga-eme gbasara mkpa anyị nwere na egwuregwu ahụ.
Otu n’ime ihe ndị nwere ike ị nweta afrustrarnos bu oge ọ na-ewe mee ihe ufodu n’ime egwuregwu. Ma ọ bụ ịmepụta ndị agha, iwu ụlọ, nyocha, na ndị ọzọ.
Lords Mobile Ihe mgbako
Agbanyeghị na ka anyị na-arịgo n'ọkwa, omume ndị a na-ewekarị oge buru ibu ka emee anyị. Ọbụna anyị chọrọ a Ọsọ ọsọ ịrụ ozi ndị ọzọ.
Ya mere, iji kwado ọrụ anyị ma ọ bụ omume dị mkpa n'ime Lords Mobile, ma ọ bụ ime ya ngwa ngwa, anyị nwere ụfọdụ akụrụngwa akpọrọ ndokwa ngwa ngwa. Akụ a na - enyere anyị aka iwepụta oge maka ọrụ anyị na - arụ n’oge a.
Agbanyeghị, isi okwu a n'isiokwu a bụ ịmata ụdị ngwa ọrụ ndị dị na mpụga anyị ga-enyocha n'ụzọ dị (iji gosipụta n'oge), ihe ndị a nwere ike inyere anyị aka ihe mgbako.
Kedu ihe bụ osooso na gịnị ka ha na-arụ ọrụ?
Osooso bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma Lords Mobile na-enye anyị ohere iji, ebe ọ bụ na dị ka okwu ahụ n’onwe ya si kwuo, ndị a na-enye anyị ohere ime ka ọrụ ụfọdụ anyị na-arụ ugbu a dị ngwa.
Enwere ike inweta ngwa ọrụ a bara uru n'ụzọ dị iche iche, ma ọ bụ site n'inweta ha site na nzụta ngwugwu, na-enweta ya na ozi na ihe omume, na-enweta onyinye nke ndị osomụpụ n'aka ndị ibe gị, n'etiti ndị ọzọ.
Lords Mobile Osooso
Ọ bụ mgbakwunye na ọtụtụ oge ndị mmadụ amaghị etu ọ ga - esi nyere ha aka. Agbanyeghị, taa, anyị ga-ekwu maka otu ngwaọrụ dị na mpụga egwuregwu vidiyo, nke ga - enyere gị aka gbakọọ ole na ole nkeji, awa ma ọ bụ ụbọchị i nwere nke gị ome osooso.
Kedu ihe bụ ihe mgbako Lords Mobile?
Ihe mgbako bụ ihe eji arụ ọrụ n'èzí na egwuregwu vidio nke Lords Mobile Markna, nke mere na ndị egwuregwu nwere ike gbakọọ ọsọ ole ha zọpụtara maka nnukwu mmelite na-esote ha na egwuregwu ahụ.
Na ya anyị nwere ohere gbakọọ ego anyị maka ụdị ọ bụla dị iche iche nke ngwa ngwa. Ndị bụ isi bụ:
General ome osooso.
Accelerators maka nyocha.
Iji rụkwaa mgbidi na mgbidi.
Ndị na-eme ngwa ngwa Fusion.
Etu ị ga-esi nweta ihe mgbako a?
Ihe mgbako Lords Mobile Nwere ike nweta ya site n’ịchọ ịntanetị, agbanyeghị na anyị tinye gị na ya njikọ a otu n'ime igwe nyocha kacha mma anyị achọtara.
Esa calculator Na otu ọ na - enye gị ohere ịhọrọ ọtụtụ ngwangwa nke ị nwere maka akụ ọ bụla. Yabụ na tebụl nsonaazụ ị na-agbakọ maka nke ọ bụla ma na-enyekwa gị nsonaazụ ikpeazụ na awa nke ndị niile na-eme ngwa ngwa ị nwere.
I nwekwara ike ịchọta akụrụngwa ndị egwuregwu ndị ọzọ mere na Spreadsheets, ndị a bụ ntakịrị karịa nkeonwe, yabụ ị nwere ike ịchọ ịntanetị ma debe nke kachasị amasị gị.
Enwere naanị ndị na-eme mgbako osisa?
Azịza nye ajụjụ a bụ Ọ bụghị!, a na-eji usoro ihe mgbako maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ, agbanyeghị nke bụ isi bụ nke ndị na-eme ngwa ngwa.
Ndị ọzọ ụdị nke mgbako ị nwere ike ịchọta:
Agha mgbako mgbako.
Onye na-ahụ maka ọzụzụ ndị agha.
Nke bara nnukwu uru.
Omume ihe nyocha.
Nke kpakpando di nsọ.
Na n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka. Egbula iji ngwá ọrụ a ma mee atụmatụ maka egwuregwu gị nke ọma ka ị bụrụ nke kachasị mma. Ka ọ dị!
Gem Koodu clash royale